Caaqilkii Cagaha Iska Gooyey “Midigeey Bidix Daa” – Rasaasa News
Jul 3, 2009 shax la dagay, sheeko
Waa sheeko Somali gaaban oo ku saabsan ninkii cagaha isgooyey, aniguse aan u bixiyey caaqilkii cagaha is gooyey, waa sheeko aad u xiiso badan kolka aad bogataana su,aalo ayaa dabayaala ee isku daya in aad ka soo jawaabtaan.
Waxaa jirta ma hadho caan ah oo si weyn looga yaqaan dhulka Somalida Ogadeeniya oo jirtay sabano badan, dadku waxay yidhaahdaan waxaa sheekadan reebay nin madax gaabni aha, waa sida ay yidhaadaane, laakiin kolka aan sheekada akhriyey aan ogaaday in ninkaasi uu ahaa caaqil aad u cadaalad badan oo damcay in uu bulshada dhaxal u dhaafo, isaga oo isticmaalaya aragtida ah “waari mayside war ha kaa hadho”.
Hadaba, bal isha ila mariya qormada sheekadan oo aan ka soo min guuriyey buuga xusuusta sheekooyinka Somalida Ogadeeniya. Sheekadan dadka qaar waxay dhahaan waa sheeko beenbeenisaad, qaarna waxay yidhaahdaan waa sheeko dhab ah oo dhacday. Waxaanse waayey inta aanan ka soo guurinin buuga xusuusta cid ii cadaysa magac ninkaas iyo meesha uu deganaa in kasta oo dadka qaar ay yidhaahdaan, ninkaasi waxaa uu deganaa mid uun gabalada Nogobeed iyo gabalka Afdheer, walise ma hayno wax xaqiiq ah.
Sidda ay sheekadu xustay ninkaasi waxaa uu ahaa nin geel jira ah, oo shaqadiisu ahayd in kolka uu waagu baryo usha uu qaato uu fiidkii dhigi jiray, waxaa uu ahaa nin aad u kansho daran oo u dhaxeeyey, in uu foodhyo, socdo iyo usha oo uu dabada haysto, hawl aduun ayuu hayey. Sidaasi daraadeed wayba adkayd in la ogaado heerka uu caqligiisu gaadhsiisnaa, waayo dad in uu la hadlo ama la fadhiisto kanshaba uma haynin.
Waxaa la sheegay in ninkaasi uu lahaa dalbo aad u xun, waxaan qiyaasayaa in uu ahaa nin aad u dheer. Dalbuhu dhibaato aad u weyn ayey ku hayeen ninkaas, kol alaale kolka uu talaabo qaadaba, labada law ayuu isku dhufan jiray. Waxaa la sheegay in labada lawba uu ku lahaa nabaro aan bogsoonin oo ay ugu wacanayd, shaqada joogtada ah ee uu ku jiray iyo isaga oo labadiisa law is garaaci jireen.
Hadaba, maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkaasi isaga oo meel cidlo ah socda oo daba socda reerkiisa oo geedi ah uuna ka yaraha dambeeyey. Kolkaas ayaa waxaa uu aad ugu fiirsaday labadiisa law midka gardarada wada , si uu eedda korka uga saaro, waxaana u soo baxday in labada law ay si is la egg isugu dhacayaan, wuu garan waayey midka uu eedda saaro. Kolkaas ayaa waxaa uu goostay in labada law uu si is la egg wax ugu sheego, wuxuuna isaga oo soconaya cod dheer in muddo ah ku laha “naa midigeey bidix daa, naa bidixeey midig daa”, kolkuu ogaaday in ayna yeelaynin ayuu cadaalad sameeyey oo labadiiba qori uu watay oo cabaysnaa uu midba mar ku dhuftay, isna halkii buu fadhiistay oo ka kiciwaayey.
Waxaa meeshii ka qaaday baa la yidhi niman reer ay ood wadaag ahaayeen oo isaga cabaar ka dambeeyey, balse aad aqoon ugu lahaa una haystay in uu yahay nin laga caqli badan yahay, waxayna waydiiyeen maxaad lawyaha isaga jabisay, wuxuuna yidhi waan kala kari waayey.
Waxaa buuga sheekada ku jirta in wixii waagaas ka dambayey uu noqday nin laxaad la,a oo gurada lagu wado kolka la guurayo, kolka la dagan yahayna jooga geed loo waabay. waxaana la sheegay in ninkaas xigmado badan laga reebay intii waagaas ka dambaysay.
Hadaba, dad badan oo akhristay buuga xusuusta ee ninkaas ayaa waxay yidhaahdaan, ninkaasi waxaa uu ahaa caran. Laakiin anigu waxaa rumays nahay in ninkaasi waa marka kowaade uu ahaa nin aad u cadaalad badan, wayo labadiisii lugood ayuu cadaalad darteed labadiiba xabad ugu dhuftay, marka labaadna in uu ahaa nin caaqil ah, sababta oo ah waxaa uu ka nastay hawshii u diiday in uu caqligiisa dadka u soo bandhigo.
Hadab, murtida sheekadan waxaa weeye in cadaaladu ay tahay wax lagama maarmaan u ah aadamaha, mida labaadna in hadalku uu yahay furaha wax ogaansha oo haduuna ruuxu hadlin aan la garanaynin wax alaale waxa uu yahay iyo waxa uu doonayo. Waaka ay Somalidu tidhaahdo “ha ila hadlin kula hadli maayee waa dagaal hortii”.
Akhristow kolka aad shekada akhridid hadii aad fahamtid ka jawaab su,aalahan,
Maxaa geelii uu ninkaasi raaci jiray ku dhacy? Labadii law ninkii ma u kabmeen?